लन्डन नेत्र, एक लण्डनमा पर्छ यात्रा समाचार
धेरै शहरहरूमा उत्कृष्ट आकर्षण, चिन्तन, डिजाइन र पर्यटक दृश्यको साथ बनाईएको छ। यसको एउटा उदाहरण हो लन्डन आँखा, कल्पित अ capital्ग्रेजी राजधानी को फेरिस व्हील जसको उचाईबाट तपाईंसँग शहरको अभूतपूर्व दृश्य छ।
यसको निर्माण पछि यो एक सफल भएको छ त्यसैले यदि तपाईं लन्डन जानुहुन्छ भने तपाईं यसको कुनै गन्डोलामा चढ्न रोक्न सक्नुहुन्न र १ London135 मीटर उचाईबाट लन्डन अवलोकन गर्नुहोस्। कस्तो दृश्य!
1 लन्डन आँखा
2 लन्डन नेत्र भ्रमण गर्नुहोस्
फेरिस व्हीलहरू केहि नयाँ होइनन्। तिनीहरू एक शताब्दी भन्दा पुरानो छन् र त्यहाँ संसार भर अन्य शहरहरु मा धेरै प्रसिद्ध फेरिस पाels्ग्रेहरु थिए। वास्तवमा, १ th औं शताब्दीको उत्तरार्धमा लन्डनमा पनि tall-मिटर फेरिस पा wheel्ग्रा थियो जुन सन् १ 94 ० in मा ध्वस्त पारियो, तर यो अभियानमा दुई लाख भन्दा बढी उत्साही व्यक्तिहरू थिए।
लन्डन आँखा २००० मा जनताको लागि खोलियो र यो आर्किटेक्ट्स, जुलिया बर्टफिल्ड र डेभिड मार्क्सको एक जोडीको डिजाइन हो। सबै आवश्यक शहरी र वातावरणीय अनुमतिहरू प्रशोधन भएपछि थेम्स नदीको किनारमा काम सुरु भयो। निर्माण वर्गहरूमा प्रगति भयो र संरचना जमीनमा स्केचको रूपमा भेला भयो पछि यसलाई अन्तिम स्थितिमा राखियो।
यो भन्न सकिन्छ कि अंग्रेजी फरिस पा wheel्ग प्यान-यूरोपीय हो: इस्पात अंग्रेजी हो तर यो हल्याण्डमा बनेको थियो, बीयरिingsहरू जर्मन हुन्, केबुल र गन्डोलासको गिलास इटालियन हो, धुरा चेक हो, बिजुली प्रणाली छ फ्रान्समा अ English्ग्रेजी र आफ्नै क्याप्सुलहरू निर्मित थिए।
उद्घाटनको समयमा प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर थिए, तर यसको उद्घाटन डिसेम्बर ,१, १ 31 1999। मा भए पनि जनताले यसै वर्षको मार्चमा मात्र आनन्द लिन सक्थे। तर लन्डन आँखा कस्तो छ? फेरिस व्हील 32२ अंडाकार आकारको क्याप्सुल छ, तताइएको छ र छाप लगाईएको छ, त्यो फेरिस व्हिलको बाहिरी परिधिमा बिजुली घुमाउँछ। प्रत्येकको १० तौल तौल हुन्छ र दस छराहरू ओ प्रतिनिध गर्दछ बरो लन्डन बाट
प्रत्येक क्याप्सूलमा २ people जना फिट हुन्छन्, जो बस्न वा स्थायी हुन सक्छ। प्रत्येक सम्पूर्ण गोदमा आधा घण्टा लाग्छ, किनकि फेरिस ह्वील प्रति सेकेन्ड २ c सेन्टिमिटरमा घुमाउँछ। धेरै फरिस पाels्ग्राहरू जस्तै यो कहिले पनि रोकिंदैन र यति बिस्तारै मोडिन्छ कि उच्च कौशल चाहिन बिना नै कोही तल जान सक्छ। ती पहिलो क्याप्सूलहरू २०० in मा नवीकरण गरिएको थियो।
किनकि यो शहरको प्रतीक हो, तुलनात्मक रूपमा नयाँ संरचनाको बावजुद, यो प्राय: भाँडा अनुबन्ध अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ जसले हातहरू परिवर्तन गर्दछ। प्रत्येक नयाँ मालिकले केहि परिवर्तनहरू गर्न सक्दछ जुन सामान्यतया नाम, प्रकाश, र अधिकसँग गर्नुपर्दछ। उदाहरण को लागी, २०१ 2014 मा कोका कोला व्यापारमा प्रवेश गरी र रातो घोषणाको रंगमा प्रमुख रंग थियो।
लन्डन नेत्र भ्रमण गर्नुहोस्
मैले माथि भनेंं, पूरा गोद आधा घण्टा र टावर ब्रिज, सेन्ट पल क्याथेड्रल, बिग बेन वा बकिंघम प्यालेसको दृश्य प्रस्तुत गर्दछउदाहरण को लागी १ 135 मिटरको उचाईको साथ, सत्य यो हो कि त्यहाँ धेरै कम मात्र देख्न सकिन्छ।
स्पष्ट रूपमा, फेरिस ह्विलले सवारी मात्र प्रदान गर्दैन। क्याप्सूल - गोन्डोलामा छिर्नु भन्दा पहिले तपाईं एउटाको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ 4D अनुभव जुन केवल चार मिनेट मात्र रहन्छ र लन्डनको ईतिहासको साथ गर्दछ। D D को अर्थ ठाउँ र आवाजहरू तर पनि सुगन्ध र धुंध र बुलबुले को प्रभाव.
लन्डन आईको दुई प्रकारका टिकटहरू छन्: मानक प्रवेश र छोड्नुहोस् - लाइन प्रवेश:
मानक टिकट: प्रति वयस्कको लागत। 34० डलर (लगभग २ p पाउन्ड), child र १ 60 वर्ष बीचको बच्चा प्रति २ 26 ० लागत र तीन वर्ष मुनिका बच्चाहरुका लागि यो निःशुल्क छ।
लाइन छोड्नुहोस्: प्रति वयस्क यसको लागत child ...47० हुन्छ, प्रति बच्चा .१.२० र यो तीन वर्ष मुनिका बच्चाहरुका लागि पनि नि: शुल्क हो।
टिकटमा DD अनुभव समावेश छ। तपाईले बुक गर्नु पर्छ तपाईलाई थाहा छ कि तपाई लन्डन जानुहुन्छ किनकि त्यहाँ प्राय: धेरै व्यक्ति हुन्छन्। तपाईं टिकट अनलाइन किन्न सक्नुहुन्छ। एक पटक भुक्तानी भएपछि, तपाईंलाई भाउचर पठाइन्छ जुन तपाईं प्रिन्ट गर्नुहोस् र त्यहा प्रस्तुत गर्नुहोस्। १ 15 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरू एक्लै जान सक्दैन र यद्यपि अशक्तहरूका लागि टिकटहरू छन् यी टिकटहरू बाकस अफिसमा सिधा व्यवस्थापन गरिन्छ।
तपाईं एक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ १%% छुट यदि लन्डो आई टिकटको अतिरिक्त तपाईले लन्डन आई नदी क्रूजको लागि खरीद गर्नुभयो भने। यो क्रूज प्रत्येक दिन हरेक घण्टा १०::10:45 बिहान 7::45। अपरेट गर्दछ। निम्नमा काम गर्दछ कार्यक्रम २०१ 2019:
जाडोमा: अक्टुबर देखि मेमा बिहान १० देखि साँझ 10 बजेसम्म, हरेक दिन। गर्मीमा, जुन देखि सेप्टेम्बर सम्म, हरेक दिन बिहान १० देखि बेलुका 8 बजे सम्म।
ठेगाना: रिभरसाइड बिल्डिंग, काउन्टी हल।
त्यहाँ कसरी पुग्ने: ट्यूब द्वारा, वेस्टमिन्स्टर / तटबन्ध स्टेशन वा रेल द्वारा, वाटरलो / चेरि Cross क्रस।
फेरिस ह्विल पनि प्रदान गर्दछ निजी क्याप्सूल जहाँ तपाईं खाना खान वा मित्रहरूको समूहसँग अधिक निजी क्षणहरू खर्च गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ लन्डन तपाईंको खुट्टामा टुक्रिन्छ। Everything२625 पाउन्डबाट सबै। अर्को विकल्प हो परिवार र साथीहरूको लागि क्याप्सूल 450० पाउन्ड र बाट मूल्यमा कामदेव क्याप्सल यसले पोमरी शैम्पेन र ch £ ०० बाट चकलेट ट्रफल्स समावेश गर्दछ।
र प्रस्ताव जारी ... त्यहाँ छ प्रस्तावित विवाह क्याप्सन शैम्पेन र चकलेट पनि साथ, £ 490 ०० मा सुरू हुन्छ क्याप्सल बर्थडे पार्टी groups450० पाउन्डको समूहहरूको लागि विवाह क्याप्सल वा केवल को संभावना अरू सात जनासँग खाना खानु।
त्यसैले आज लन्डन फेरिस ह्विलको रूपमा चिनिन्छ कोका कोला लन्डन आँखा। तपाईंले यसलाई टेम्समा संसद र बिग बेनको हाउसको अगाडि पाउनुहुनेछ। क्याप्सूल भित्र अन्तरक्रियात्मक गाईडहरू छन् जुन तपाईंलाई तपाईंले देखिरहनु भएको कुरा पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ जुन अ English्ग्रेजी राजधानीको सब भन्दा प्रतीकात्मक बिन्दु हो, र राम्रो कुरा यो हो कि यो धेरै भाषाहरूमा छ। आशा छ, स्पष्ट दिनमा तपाई you० किलोमिटर वरपरका परिदृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » लन्डन » लन्डन नेत्र, एक लण्डनमा पर्छ